Diaben’ny Belza 10.000 Ho Fampanajana ny Zon’ny Mpifindramonina ao Bruxelles · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2018 7:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Ελληνικά, Português, English
Mpanao fihetsiketsehana iray ao Bruxelles mampakatra sora-baventy iray mivaky hoe “Tongasoa ny mpialokaloka,” tamin'ny 25 Febroary 2018. Tompon-tsary: Melissa Vida.
Mpanao fihetsiketsehana miisa iray alina no nanavatsava ny lalamben'i Bruxelles tamin'ny 25 Febroary 2018 ho firaisan-kina amin'ireo mifindramonina tsy manana antonta-taratasy sy ho fitakiana lalàna manaja ny mahaolona kokoa manoloana ireo mpifindramonina. Ny tena toherin-dry zareo indrindra dia ny volavolan-dalàna ahafahan'ny polisy misava ny tranon'olon-tsotra ho fikarohana ireo olona tsy manana antotan-taratasy ireo :
Mitabe firaisan-kina hahazoana politikam-pifindramonina manaja ny zon'olombelona tao Bruxelles androany
Maro amin'ireo tsy manana antonta-taratasy ao Belzika ireo no mitady fialokalofana saingy nolavina ny fangatahany, na misy koa ireo nonina tao amin'ny Alan'i Calais taloha izay niezaka ny hiditra any amin'ny Fanjakana Mitambatra avy ao amin'ny Seranan'i Calais na avy ao amin'ny Eurotunnel.
Volavolan-Dalàna momba ny fahafaha-misava tranon'olon-tsotra
Ilay ho lalàna dia manome alalana ny mpitsara mpanao famotorana hamoaka didy fisavana sy hisamborana mpifindramonina tsy manana antonta-taratasy. Mety hihatra amin'ny tranon'olon-tsotra ihany koa ny bemidin'ny polisy, izay mikendry ireo olona nahazo didy hiala amin'ny firenena. Mampanahy ireo Belza miisa efatra alina nanampy sy nampiatrano mpifindramonina noho ny antony maha-olombelona izany.
Rehefa tsy mahazo ny fanampian'ny governemanta ireo mpifindramonina tsy manana antonta-taratasy ireo dia matory eny an-dalamben'i Bruxelles, izay matetika ao anatiny hatsiaka mamirifiry. Mba hanavotana an-dry zareo amin'izany mety hanjo azy ireo izany, dia misy ny vondrona Belza maka azy ireo isak'alina sy mametraka azy ireo amin'ny tranon'izay manolo-tena hampiatrano; Avoakan'ny mpampiatrano izy ireny isa-maraina alohan'ny andehanana miasa, dia mitohy tahaka izany hatrany ny raharaha :
Noho ny fitomboan'isan'ireo mpifindramonina tonga ao Belzika, misy ireo olom-pirenena manome fialofana azy ireo. Avelan'ny lalàna belza ny olom-pirenena handray mpifindramonina. Saingy mety hiova izany.
Ity vondrona iray ity dia anisan'ny “sehatry ny olom-pirenena manohana ny fampiatranoana mpifindramonina”, izay nahazo ny Olon'ny Taona 2018 ao Bruxelles :
“Mifampizara ity loka bruxellois ity amin'ny Belzika iray manontolo sy ireo olona miisa 40.000 mihetsika ho amin'izany izahay”. Théo raha mahita izany ianao…” Mehdi Kassou, avy amin'ny Sehatry ny Olompirenena #brusselspersonoftheyear2018
Malahelo amin'ny tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ireo olona lasa eny an'arabe ny sehatry ny olom-pirenena ary mitsikera izay hitan'izy ireo ho fironana mankany amin'ny fanjakam-polisy sy ny fiheverana ny mpifindramonina ho jiolahy. Lasibatr'izy ireo manokana amin'izany tsikera izany i Theo Francken, sekreteram-mpanjakana misahana ny fifindramonina sy ny fialokalofana.
Toherin'ny Belza ny fandraofana olona, ny foibem-pitazonana olona eo andalam-panorenana ary ny fitaovana sy ny olona efa vonona amin'ny fombafombam-pandroahana. Manazava i Alexis Deswaef, filohan'ny fikambanana ligin'ny zon'olombelona fa ny Fiarahan-Dia Flamande Vaovao, antoko nasionalista farany ankavanana eo amin'ny fitondrana no mitarika ny famoretana ireo mpifindramonina. Noteneniny tao amin'ny radio Europe1 ny likilikim-pony:
Noho ny olom-pirenena irery ihany no tsy nisian'ny Calais faharoa eto Bruxelles fa tsy noho ity governemanta ity. Mamela ny tenany hotarihan'ny antoko manavaka mari-panondroana sy nasionalista ny governemanta, fa efa mihamafy orina ny fanoherana.
Eo am-panorenana foibem-pitazonan'olona telo vaovao hitazonana ireo mpifindramonina tsy manana antonta-taratasy mandra-pandroahana azy ireo ny firenena. Handray fianakaviana miaraka amin'ny ankizy kely ny iray amin'ireo foibe ireo, ka izay no nampaneno ny kiririokan'ny mpikatroka maro. Nomelohin'ny Fitsarana Eoropeana Misahana ny Zon'Olombelona i Belzika tamin'ny taona 2008 noho ny finitsakitsahana ny mahaolona nataony tamin'ireo ankizy efatra nofonjainy. Tsy maintsy nanakatona ilay foibe i Belzika.
Indraindray mitranga ny fahatafintohinana na dia aorian'ny fandroahana aza. Tamin'ny Desambra 2017, naverina tany Sodàna Atsimo ny Sodaney mpitady fialokalofana vitsivitsy; nisy ny tatitra fa nampijaliana ry zareo rehefa tafaverina tao Khartoum. Na dia tsy voamarina aza ny fanambarana nataon'ireo olona ireo, dia tsy maintsy nanaiky ny Komisarià Jeneraly misahana ny mpifindramonina sy ny tsy manan-tanindrazana fa tsy nanaraka ny fomba fanao ara-pitsarana i Belzika mialoha ny nandroahana azy ireo.
Manahy ihany koa ny Belza fa ho lasa fahita mahazatra ny bemidina ataon'ny polisy amin'ny mpifindramonina tsy manana antonta-taratasy. Niditra tao amin'ny Globe Aroma, ivon-javakanton'ny mpifindramonina tsy mitady tombom-barotra ny polisy tamin'ny 9 Febroary 2018 ary nitazona mpifindramonina tsy manana antonta-taratasy miisa fito tao.
Tezitra fatratra ny talen'ny ivontoerana, Koen Verbert. Nohazavainy tao amin'ny fampitam-baovao tao an-toerana ny fomba fijeriny:
Raha fisavana fifandaminana tsy mitady tombontsoa fanao mahazatra iny, dia miaina ao anatin'ny fanjakam-polisy isika. Nodarohina sy nametahana rojovy tsy misy antony ny olona mira-miasa aminay. Tsy azo leferina izany.
Fisamborana tao amin'ny Globe Aroma: fikambanana miisa 29 mamelatra sora-baventy ho fanohanana ireo tsy manan-taratasy
Notakian'ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny diabe ny famotsorana ireo olona manana ny lazany sasany nosamborina tao amin'ny ivon-javakanto :
Androany, tahaka ny isan'andro, manao fihetsiketsehana ho firaisankina amin'ny tsy manan-taratasy ny tanora ao Bruxelles ary mitaky ny famotsorana ny sendikalista #MounirTahri sy ny artista Jiyed, nosamborina tao amin'ny fikambanana #GlobeAroma ary mbola voatazona hatramin'izao. @FranckenTheo @JanJambon
Ity ny diabe fahatelo tamin'ity taona 2018 ity fotsiny. Tamin'ny 13 Janoary, Belza miisa 8000 no nanao fihetsikesehana hialan'i Theo Francken sy ho fampanajana ny zon'ny mpifindramonina Sodaney; tamin'ny 21 Janoary, olona mihoatra ny 2000 no nanao tohivakan'olombelona hisorohana ny fisavan'ny polisy. Raha eo am-pamaritana ny politikam-pifindramonina ny governemanta belza, mamoaka ny feony amin'ny alalan'ny hamaroany ny Belza.